Yakachipa CNC yekugaya simbi simbi zvikamu fekitori uye vanotengesa | Ouzhan
Stainless simbi CNC hwokugaya-nemazvo Stainless simbi azvikuya zvikamu
Stainless simbi inewo zvinhu zvakaita saNi, Ti, Mn, N, Nb, Mo, Si, uye Cu. Stainless simbi ine yakanakisa hunhu senge yakasarudzika simba, yakakwira kupfeka kuramba, yepamusoro ngura kuramba uye kuramba ngura. Naizvozvo, inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri, michina yezvikafu, indasitiri yemagetsi, indasitiri yemidziyo uye kushongedzwa kwemba, kupedzisa indasitiri. Iko kunyorera uye tarisiro yekusimudzira yesimbi isimbi ichave yakafararira uye yakafara, asi iko kushandiswa uye kuvandudzwa kwesimbi isina simbi kunonyanya kutemerwa nedanho rekuvandudzwa kwehunyanzvi hwekurapa kwepamusoro.
Zvakanakira zveOuzhan simbi isina simbi yakagezwa zvikamu
- Zvepanyama zvivakwa: kupisa kupisa, kupisa kwakanyanya kupisa, kudzikira kwekushisa tembiricha uye kunyangwe Ultra-yakaderera tembiricha kuramba.
OEM yakagadziriswa simbi isina kugadzirwa sevhisi-China Shanghai CNC simbi isina simbi yekugaya zvikamu zvemugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, inogona kugadzirisa isina simbi ine yakagadzikana uye yakavimbika yepamusoro-chaiyo CNC yekugaya zvikamu. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuona iko kugadzirwa kwakakwana kwesimbi isina simbi yekugaya muchina zvikamu. Uye zvakare, iyo CNC yakagezwa simbi isina simbi zvigadzirwa zvinopihwa zvakanyatso kutevedzera zvemhando yepamusoro uye inogona kushandiswa mune akasiyana mafekitori ekushandisa. Uye isu tinogona kupa inokwikwidzana mutengo masevhisi esimbi simbi CNC yekugaya zvigadzirwa kune edu akakosha vatengi.
Ndezvipi zvinoshandiswa nesimbi isina simbi yakagezwa zvikamu
1. Austenitic simbi isina chinhu yakasungirirwa zvikamu zvine zvakakwana uye zvakanaka kuita, uye zvinoshandiswa zvakanyanya mukudya, zvakajairika zvemakemikari michina, uye simba reatomiki;
2. Ferritic simbi isina simbi yakakwenywa zvikamu, inoshandiswa zvakanyanya mupitting-resistant zvinhu;
3.Martensitic simbi isina chinhu yakasungirwa zvikamu, zvinoshandiswa zvakanyanya mumidziyo inopesana nesulfuric acid, phosphoric acid, formic acid, uye acetic acid;
4. Chromium-nickel-molybdenum isina simbi yekugaya zvikamu, zvinoshandiswa zvakanyanya mukuchenesa oiri, fetiraiza, bepa, peturu, makemikari uye mamwe maindasitiri kugadzira kupisa zvinopisa uye macondensers.
Zvakanakira Ouzhan Stainless simbi azvikuya basa
- Zvese zvakarongeka CNC yakashongedzwa simbi isina simbi zvigadzirwa zvinoenderana nekuomarara kwemhando yekuongorora.
- Sekureva kwemadhirowa kana masampuli ekugadzira iwo chaiwo machira esimbi esimbi.
- Ouzhan ine zvinopfuura zvekugadzira michina, masevhisi akasanganiswa, akajairika mitsara yekugadzira, uye inouya nezvinhu zvechitupa uye nemishumo yekuyedza kwechigadzirwa.
Pashure: Yakakwenenzverwa aruminiyamu chiwanikwa musu uye hwindo kugadzira zvikamu
Zvadaro: Yakasarudzika simbi isina simbi yekugaya zvikamu zvekugadzirisa michina zvikamu